“SAWIRRO”Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
“SAWIRRO”Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay “SAWIRRO”
Mogadishu, 18 July 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin, Ciidanka Xoogga oo u diyaar-garoobaya xoreynta dalka, Midowga Yurub, Sweden & Norway oo xoojinaya xiriirka Soomaaliya, Tayada aqoonta iyo khibrada Saraakiisha Booliska oo sare loo qaadayo, Wadatashi dhexmaray Dowladda Federaalka, Puntland iyo Jubbaland, Soomaaliya oo Maxkamada Caalamiga si rasmi ah ugu gudbisay dacwo ka dhan ah Kenya ee ku aadan xaduuda Badda, Dowladda oo deeq dawo ah ku wareejisay Maamulka Gobolka Sh/ Dhexe, Dowladda oo mudnaan gaar ah siisay bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah, Djibouti oo deeq raashin ah soo gaarsiisey agoonta Soomaaliyeed, Kooxda Heegan oo ka qeybgaleysa Tartanka Bariga & Bartamaha Afrika, Xirfada iyo aqoonta Macalamimminta Gobollada Dhexe oo sare loo qaadayo iyo Ciidanka Amniga oo Baydhabo ku qabqabtay Maleeshiyaadka Al-Shabaab, Wasiiro, Xildhibaano, Marwada Madaxweynaha ayaa deeq iyo hadiyado gaarsiiyey caruur agoon ah.
Ciidanka Xoogga oo u diyaar-garoobaya xoreynta dalka
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa 15kii July 2015 kormeer ku tagey xarumo dhowr ah oo leeyihiin Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana uu halkaas kula hadlay Ciidankii joogay, iyadoo uu kormeerka ku wehliyey Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Sareeyo Gaas Daahir Aaden Cilmi iyo xubno ka socday Madaxtooyada dalka. Wasiirka ayaa booqday xarunta tababarka Ciidanka ee Jazeera, halkaas oo dhoolatus millatari ay ka wadeen ciidamada Xoogga, waxaana uu ku amaanay qaabka ay tababarka u qaadanayaan, isagoo kula dar daarmay ciidanka ka tirsan kumaandooska Qaranka in awoodooda ay ku difaacaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale, Wasiirka ayaa tababar u furay boqol askari oo ka tirsan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa u sheegay ciidanka kumaandooska ee maanta dhoolatuska sameeyay iyo kuwa uu tababarka u furay intaba inay ilaaliyaan sumcadda iyo sharafta ay ku dhex leeyihin dalkooda iyo dadkooda, isagoo uga digay isticmaalka mukhaadaraadka oo uu qaadka ugu horeeyo. Ugu danbeyn, Wasiirka ayaa booqday Xarunta Akeedeemiyada Saraakiisha oo dhismaheedu ka soconayo deegaanka Jazeera, waxana uu halkaas warbixin uga dhigeystay masuuliyiinta gacanta ku haya dhismaha xerada.
Midowga Yurub, Sweden & Norway oo xoojinaya xiriirka Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 14kii July 2015 magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Sweden, Kjell Stefan Löfvén oo ka mid ah madaxda ka qeybgaleysa Shirweynaha 3aad ee Maalgelinta Barnaamijyada Horumarinta Caalamiga. Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulankooda kaga wadahadley xoojinta xiriirka labada dal, iyo barnaamijyada horumarinta ee Sweden ay dooneyso inay ka taageerto Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyey Sweden sida ay mar walba u garab taagan tahay Soomaaliya. Dhanka kale Madaxweynaha ayaa isla magaalada Addisa Ababa ku qaabiley Madaxa Guddiga Midowga Yurub ugu qaabilsan Iskaashiga Caalamiga iyo Horumarinta, Neven Mimica. Madaxweynaha ayaa wafdiga Midowga Yurub uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya, dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha. “Midowga Yurub waan uga mahadcelineynaa taageerada dhinacyada kala duwan leh ee uu Soomaaliya u fidinayo. Maadaama aan ka soo gudubney xiligii xaaladaha degdegga, waxaan haatan codsaneynaa in dalkeena laga taageero dib u dhiska kaabeyaasha dhaqaalaha, dib u dhiska ciidamada, iyo in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada,’’ ayuu yiri Madaxweynaha. Madaxa Guddiga Midowga Yurub ugu qaabilsan Iskaashiga Caalamiga iyo Horumarinta, Neven Mimica ayaa kulanka ka sheegay in Midowga Yurub uu tixgelin siin doono baahida Soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska, arrimaha siyaasadda iyo amniga. Madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan la qaatay Wasiirka Arrimaha Dibedda dalka Norway oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirrada Arrimaha Dibedda, Mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar, Batroolka, Mudane Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo mas’uuliyiin kale oo labada dhinac ka tirsan.
Tayada aqoonta iyo khibrada Saraakiisha Booliska oo sare loo qaadayo
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud ayaa 14ka July 2015 siminaar aqoon kororosi ah u furay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska oo ka kala yimid qaar ka mid ah Gobollada dalka, gaar ahaan Puntland, Jubaland, Koofur galbeed, Galmudug, Hiraan iyo Shabeelaha Dhexe, iyadoo ay ka qeyb galeen furintaankii aqoon kororsigaasi saraakiil ka socota UN-ka. Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka booliska Soomaaliya ay mid yihiin, isla markaana aysan xaduud laheen, waxa uuna xusay taliyuhu in ay ka doodi doonaan mudada uu aqoon is weydaarsiga socdo qorshaha heegan ee booliska Soomaliyeed, kaa soo ay booliska ugu bandhigi doonaan adduunka waxyaabaha ay ciidanka u baahan yihiin. Ujeedada tababarkan ayaa ah sidii Ciidanka Booliska loo mideyn lahaa oo ay isku ujeedo iyo isku hadaf uga noqon lahaayeen dib u soo celinta amniga iyo kala danbeynta dalka.
Wadatashi dhexmaray Dowladda Federaalka, Puntland iyo Jubbaland
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa 13kii July 2015 gaaray magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal iyadoo halkaasi si diiran ay ugu soo dhaweeyeen Madaxda Dowlad Goboleedka Puntland, Wasiiro, Xildhibaanno, waxgarad, siyaaasiyiin, aqoonyahanno, haween, Dhallinyaro iyo mas’uuliyiin kale. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay booqashada Ra’iisul Wasaaraha ayaa inay sharafweyn u tahay inay soo dhaweyaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, sheegayna in uu u yimid kulan wadatashi ah ee dhanka xiriirka Dowladda Federaalka iyo Puntland. Ra’iisul Wasaaraha Sharmaarke ayaa dhankiisa muujiyey inuu si aad ah ugu faraxsanyahay socdaalkiisa. Madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madoobe oo isna ku sugnaa Garoowe ayaa Madaxdu waxey kulamo wadatashi ah ka yeesheen hiigsiga 2016 iyo sidii loo dar-dargelin lahaa howlaha muhiimka ah ee horyaalla Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Soomaaliya oo Maxkamada Caalamiga si rasmi ah ugu gudbisay dacwo ka dhan ah Kenya ee ku aadan xaduuda Badda
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa 13kii July 2015 si rasmi ah ugu gudbisay Maxkamadda Caddaaladda ee fadhigeedu yahay Hague, dalka Netherlands, dacwad ka dhan ah Jamhuriyadda Kenya kuna saabsan soohdinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Soomaaliya waxay Maxkamadda weydiisatay in ay cayinto soohdinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya ee Badweynta India oo ay ku jiraan biyaha dalka, aagga dhaqaale ee gaarka ah, geyi-qaaradeedka iyo geyi-qaaradeed wixii ka baxsan 200 oo nootickal meyl. Dacwadda waxaa gudbiyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Axmed Cali Daahir, oo ay wahliyaan Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Faqi, Qareenka Soomaaliya u qaabbilsan dacwaddan, Muna Sharmaan, Qareenno iyo khubaro kale. Waxaa dacwadda guddoomay Diiwaanhayaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, Philippe Couvreur. Soomaaliya waxay rumeysan tahay in kiiskeedu uu ku qotomo sharciyad culus, waxayna Maxkamadda ka sugeysaa go’aan caddaalad ah.
Dowladda oo deeq dawo ah ku wareejisay Maamulka Gobolka Sh/ Dhexe
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, Mudane Cismaan Daallo ayaa 13kii July 2015 waxa uu deeq dawo ah ku wareejiyay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe, si loogu adeego dadka ku dhaqan gobolkaasi. Deeqdan dawada ah ayaa ka koobneyd noocyo badan. Mudane Cismaan Daallo ayaa sheegay in deeqdan lagu wareejiyay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ay qeyb ka tahay dadaalada wasaaraddu ay ku dooneyso in ay kor ugu qaado caafimaadka dadka Soomaaliyeed. Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Soomaaliya ayaa mudooyinkii dame waxaa ay deeq sidan oo kale ah ku wareejiysay qaar kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena deeq dawo ah gaarsiisya xarumaha caafimaad oo ku kala yaala magaalooyinka Baydhabo, Xudur iyo Cadaado, waxay sidoo kale deeq tan lamid ah ku wareejisay dhowaan madaxweynaha maamulka Khaatumo.
Dowladda oo mudnaan gaar ah siisay bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah
Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Maaliyadda XFS Maxamud Xayir Ibraahim iyo Xisaabiyaha Guud ee Qaranka Axmed Yuusuf Muumin (Siraaji) ayaa 13kii July 2015 booqday Bangiga Dhexe oo ay ka socotay bixinta mushaaraadkii shaqaalaha dowladda, waxayna kormeer ku soo sameeyeen qaybaha kala duwan ee Bangiga. Shaqaalaha dowladda ayaa safaf dhaadheer ugu jiray qaadashada mushaarka, si ay ula ciidaan qoysaskooda, waxaana dowladu dadaal ugu jirtaa sidii hada kadib shaqaalaha dowladda mushaarkoodu joogta u noqon lahaa. Wasiir Xayir ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ee la filayey in lagu kabo miisaaniyada Dowladda inaysan sidii loo rabay u soo gaarin, isla markaasna dakhliga Dowladda mudnaanta koowaad la siiyey dhanka amniga iyo ciidamada, tanoo keentay in mushaaraadka Shaqaalaha rayidka ah ay soo daahaan. Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dhibaatada kale oo soo wajahday in mushaaraadka dib u dhacaan ay sabab u tahay Bangiga Aduunka oo kabi jiray mushaaradka in laga soo biloobo bishii March uu dib u dhac ku yimid kadib markii uu dhamaaday heshiiskii halka sano ahaa. “Nasiib wanaag waxaan ku guulaysanay bishaan bilowgeeda in aan la saxiixano heshiis kale oo 5 sano ah Bangiga Aduunka, kaas oo lagu kabayo musaaraadka shaqaalaha rayidka ah, Dowladdu waxay dadaal u gashay in mushaaradku aysan hada ka dib kala go’ayn, lana bixinayo dhamaan bilihii la soo dhaafay mushaaradka shaqaalaha rayidka ah ka maqan. Ugu danbayntii Xisaabiyaha Guud ee Qaranka ayaa u mahadceliyey shaqaalaha dowladda adkaysiga ay muujiyeen iyo sida ay ugu dhabar adeeygeen dhibaatooyinka mushaar la’aaneed ee soo wajahay. wuxuuna sidoo kale sheegay in mushaaraadka ciidamda dhakhso loo bilaabi doono.
Djibouti oo deeq raashin ah soo gaarsiisey agoonta Soomaaliyeed
Safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalka Soomaaliya Mudane Dayid Dubad Rooble ayaa 13kii July 2015 deeq uu soo dhiibay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu gaarsiiyey gabdho ogoon ah oo lagu xanaaneeyo xarun ku taala degmada Boondheere, iyadoo safiirka ay wehlinayeen Wasiirada Warfaafinta iyo Haween-ka iyo mas’uuliyiin ka socday maamulka gobolka. Mas’uuliyiintan ayaa marka hore kormeerey qololka ay jeeftaan gabdhahan agoonta ah si ay u ogaadaan xaalada nololeed oo ay ku sugan yihiin, waxaana intaasi kadib lagu soo dhaweeyey safiirka iyo mas’uuliyintii dowlada ee la socday hees carruurto ay ku muujinnayeen sida Jabuuti u garabtaagan tahay Soomaaliya. Mudane Dayib Dubad Rooble safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdaan ay dowladda Jabuuti ugu talagashay in lagu caawiyo gabdhaha agoonta ah, isagoo tilmaamay in madaxweynaha dalka Jabuuti xilligii uu booqashada ku imaanayay magaalada Muqdisho oo amray in deeq la gaarsiiyo carruurtan agoonta ah. Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir (Mareeye) ayaa balan qaaday inuu ka qayb qaadanayo ciida gabdhahaan agoonta ah, isla markaasna uu golaha wasiiradana uu hor gayn doono marxalada carruurtaan. Wasiirka Haweenka iyo horumarinta Xuquuqul Insaanka Sahro Maxamed Cali Samatar ayaa baaq u dirtay madaxda iyo shacabka waxayna xustay carruurta ku jirta xarumaha xanaanada iyo kuwa dhibaataysana ay yihiin mustaqbalka kuwii dalka hanan lahaa. Tan iyo markii ay bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa isa soo tarayay gargaarka la gaarsiinaayo dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho iyo goobaha kale ee dalka.
Kooxda Heegan oo ka qeybgaleysa Tartanka Bariga & Bartamaha Afrika
Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliya iyo saraakiil kale ayaa 15kii July 2015 garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ay ku sagootiyeen kooxda kubadda cagta ee Heegan oo ka qeybgalaysa tartanka bariga iyo bartamaha Afrika oo dhowaan ka furmaya dalka Tanzania. Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud ayaa kula dar-daarmay dhammaan cyaartooyda ka qayb galaya tartanka inay muujiyaan aqlaaq wanaag, islamarkaana ay guul u soo hooyaan Qaranka. Guddoomiyaha Naadiga Heegan ee Ciidanka Booliska Maxamed Ibraahim Cabdi Diyeeshe ayaa sheegay in bixitaanka cayaartooydaan uu gacan weyn ka qaatay Taliyaha Ciidanka Booliiska Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xamuud, isagoo uga mahad celiyay Dadaalkiisa uu ku bixiyay heerka maanta ay joogaan kooxda kubadda cagta Heegan. Qaar ka mid ah cayaartooyda u amba baxay Dalka Tansaniya ayaa iyaga oo ka hadlayay dareenkooda waxa ay dhammaan u mahadceliyeen taliska Booliiska, iyaga oo rajeeyay in guul wanaagsan ay u soo hooy doonaan Ummadda Soomaaliyeed. Kooxda kubadda cagta ee Heegan ayaa ah kooxda ku guuleysatay horyaalka heerka koowaad ee dalkeena, waxaana uu dalka Tanzania ka furamayaa 18-ka July.
Wasiiro, Xildhibaano, Marwada Madaxweynaha ayaa deeq iyo hadiyado gaarsiiyey caruur agoon ah.
Maalinta munaasabada Ciida awgeed ayaa Wasiiro, Xildhibaano, Marwarada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa deeq iyo hadiyado gaarsiiyey caruur agoon ah. Ujeedada deeqdan iyo hadiyadaha ayaa aheyd in shacabka Soomaaliyeed lagu dhiiri geliyo sidii ay isu taageeri lahaayeen oo ay dadka tabaaleysan u gar-gaari lahaayeen si looga maarmo kaalmo shisheeyo oo dhaqan noqotay. Wasiirka Warfaafinta oo ka mid ahaa mas’uuliyiintan ayaa sheegay inay muhiim tahay in carruurta agoonta ah laga warqabo, oo bisha barakeysan ee Ramadaan fadhligeedana ay noo noqoto tusaale si aan u joogteyno ka warqabka carruurta agoonta ah oo runtii ah mustaqbalka berry ee dalka Soomaaliya.
Xirfada iyo aqoonta Macalamimminta Gobollada Dhexe oo sare loo qaadayo
Macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa 12kii July 2015 loogu soo gabogabeeyey tababar ay ka faa’iidesyteen 34 macalimiin. Tababarkan oo lagu qabtay Jaamicadda Gaalkacyo ayaa waxa uu socday mudo bil ah. Munaasabada xiritaanka tababarkan oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin, aqoonyahano madaxda Jaaamacada Gaalkacyo ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiye ku xigeenka Jaamacadaasi Muxiyadiin C/laahi Cabdi oo sheegay in looga baahan yahay macalimiinta tababarka qaatay in laga sugayo inay bulshada gaarsiin doonaan wixi ay barteen. Maxamuud Aadan Cabdile ayaa uga mahad celiyay macalimiintii tabbarka loo soo xiray sidii ay ugu dhabar adeeygeen mudadii uu socaday tabbarku. Tababarkaan ayaa qeyb ka ah tababaro dhanka macalimiinta oo ka socanaya magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo loogu talagalay sidii loo tayayn lahaa aqoonta macalimiinta oo waxtar weyn u ah bulshada.
Cidianka Amniga oo Baydhabo ku qabqabtay Maleeshiyaadka Al-Shabaab
Ciidamada ammaanka Baydhabo ayaa ku guuleystay in ay qabqabtaan qaar ka mid ah maleeshiyaadka Al Shabaab kuwaa oo ku hungoobay weerar 11kii July 2015 ay ku qaadeen guri Baydhabo ay ka dagan yihiin xubno ka tirsan maamulka Koofur Galbeed ee Soomaaliya. Weerarkan oo ay maleeshiyaadka u adeegsadeen bambooyinka gacanta ayaa waxaa lagu guuleystay in la iska baaciyo oo nolol lagu qabqabto. Ciidamada Ammaanka ayaa magaalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Bay beryahanba ka waday howlgallo lagu sugayo amniga iyagoo ka helaya taageero buuxda shacabka deegaanka.
Munaasabad lagu weynayay ciidul fitriga oo lagu qabtay degmada Kaaraan
“SAWIRRO”Maalinta labaad ee ciidda oo si weyn looga dabaal degay caasimadda iyo Gobollada dalka “SAWIRRO”
"SAWIRRO"Maalinta labaad ee ciidda oo si weyn looga dabaal degay caasimadda iyo Gobollada dalka "SAWIRRO"